လှူဒါန်းရန် | ခန်းအကယ်ဒမီ
အန်ဂျလီသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူ အခန်းတစ်ခန်းပါ အိမ်ကျဉ်း၌ နေထိုင်သည်၊ သို့သော် သူမ၏ အိပ်မက်မှာ ကမ္ဘာကြီးအားပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ခန်းအကယ်ဒမီအား အသုံးပြုကာ သူမ၏ အိပ်မက်များကို မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကို လေ့လာပါ။
ခန်းအကယ်ဒမီမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော 501(c)(3) အမြတ်အစွန်းမယူသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အလျောက် ကျွန်တော်တို့ထံလှူဒါန်းမှုများမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အခွန်နံပတ်မှာ 26-1544963 ဖြစ်သည်။
To learn more about our generous donors, please visit our ထောက်ခံအားပေးသူများ. Click here for our 2020 နှစ်စဉ်ရှင်းတမ်း. Please follow these links for the 2019 နှစ်စဉ်ရှင်းတမ်း, 2018 နှစ်စဉ်ရှင်းတမ်း, and the 2017 နှစ်စဉ်ရှင်းတမ်း.
ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဘဏ်ငွေလွဲစနစ်ဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသလား?
အွန်လိုင်းမှအခြားနည်းလမ်းဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသလား၊ ဥပမာ cryptocurrency သို့မဟုတ် Square Cash?
အလုပ်ရှင်မှ တန်ပြန်လှူဒါန်းခြင်းအား လက်ခံပါသလား?
အမေရိကန်ဒေါ်လာမှအပ အခြားငွေကြေးဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသလား?
သင်ယူသူရံပုံငွေ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
လစဉ်ပုံမှန်လှူဒါန်းမှု ဖိုင်တွဲ၌ ကျွန်ုပ်၏ အကြွေးဝယ်ကဒ်အား မည်သို့ပြောင်းလဲရပါမည်နည်း?
လစဉ်လှူဒါန်းမှု အလှူငွေပမာဏအား မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း?
ကျွန်ုပ်၏ လစဉ်လှူဒါန်းမှုအား မည်သို့ပယ်ဖျက်ရမည်နည်း?
ကျွန်ုပ်၏လှူဒါန်းမှုအား အမှန်တကယ်ထိရောက်စေလိုပါသည်။ ထို့အတွက် ခန်းအကယ်ဒမီအနေဖြင့် ရံပုံငွေအား မည်သို့မည်ပုံ အသုံးပြုကြောင်း မည်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း?
ခန်းအကယ်ဒမီ၏ ပြည်နယ်တိုင်းအတွက် အလှူမှတ်ပုံတင်လျှင် လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းချက်များအား လိုက်နာကြောင်းမည်သို့စစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း?
ဤနေရာတွင်ဖြေဆိုထားခြင်းမရှိသော မေးခွန်းများသင့်ထံတွင်ရှိပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးလ် donate@khanacademy.org ပို့ပါ။ လတ်တလောအလှူအတန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍မေးမြန်းလိုပါက အလှူပြုလုပ်စဉ်ထည့်သွင်းသော သင်၏ အမည်အပြည့်အစုံ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာအား ကျေးဇူးပြု၍ ထည့်သွင်းပေးပါ။
လှူဒါန်းခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် အခြားကိစ္စရပ်များအား၊ ဥပမာ လှို့ဝှက်နံပတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ မေးမြန်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာ အကူအညီစင်တာ သို့သွားပါ။